Tag: mailaka marketing roi | Martech Zone
Tag: mailaka marketing roi
Fa maninona no mahomby ny gazety e-mail?
Alakamisy, Desambra 6, 2012 Talata, Desambra 4, 2012 Douglas Karr
Vao haingana aho no nandefa ny lisitry ny lisitry ny varotra an-tserasera ary iray amin'ireo paikady izay lohalaharana ny marketing amin'ny mailaka. Ny marketing amin'ny mailaka dia mbola manana tambiny avo lenta amin'ny fampiasam-bola, vidiny ambany amin'ny fidirana, ary iray amin'ireo teknolojia fanosehana vitsivitsy sisa tavela ho an'ireo mpivarotra hanantona ireo mpanjifany ankehitriny. Miasa ny marketing amin'ny mailaka - fantatsika rehetra izany fa ohatrinona ny lanjan'ny mailaka mailakao amin'ny fikambanana misy anao? Azonao ve ny
Sendra ny horonan-tsarin'i Tony Robbins tao amin'ny TED aho izay tena nanentana ny fanahy. Ny iray amin'ireo andalana nosoratany tamiko dia tena marina: Harena mifanohitra amin'ny fahaiza-mitantana Iray amin'ireo asa mahafa-po ahy indrindra dia ny fananana consultant ho an'ny Integract for ExactTarget. Tamin'izany fotoana izany, ny ExactTarget dia nanana fampiasa fampiasa fampiharana (API) somary voafetra ihany saingy nitombo ny fahaizanay sy ny mandeha ho azy ny mpanjifanay. Isan'andro dia fihaonana tamin'ny mpanjifa izay nanana